महेश वस्नेत र गोकुल वास्कोटाविच भिडन्त ! - Sankalpa Khabar
महेश वस्नेत र गोकुल वास्कोटाविच भिडन्त !
६ मंसिर १६:०१
काठमाण्डौं । आइतवार एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि अवेर राती केपी ओलीका निकट नेता भनेर चिनिएका गोकुल वास्कोटाले लेखे– धैरै कमरेडहरु भटाभट उम्मेदवारी घोषणा गर्दै पो रेछन त १ जे त होला म पनि गर्दिम कि जस्तो लाग्न थाल्यो बा !
यस्तो लेख्ने वित्तिकै उनी निकटका युवाहरुले वास्कोटा सचिवमा उम्मेदवारी दिन लागेको सार्वजनिक गरे । र,उनले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि पाए । तर,वास्कोटाले सचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा भने गरिहालेनन । तर,सोमवार मध्यान्ह अध्यक्ष केपी ओलीकै निकट अर्का युवा नेता महेश वस्नेतले पार्टी सचिवमा उम्मेदवारी नै घोषणा गरे । वास्कोटाले सचिवमा उम्मेदवारी दिने कुरा चुहाउनु अघिसम्म वस्नेतले सचिवमा उठने सामान्य चर्चा समेत गरेका थिएनन तर जव वास्कोटाले कुरा चुहाए वस्नेतले घोषणा नैगरिहाले । यसपछि अब नेकपा एमालेमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका निटक दुइ युवा नेताहरुविच नै भिडन्त हुने भएको छ ।
एमाले भित्र केपी ओलीकै भित्रिया समुह भनेर चिनिएपनि युवा नेताहरु गोकुल वास्कोटा र महेश वस्नेत विचको सम्वन्ध अत्यन्त कटुतापुर्ण रहेको छ । एउटै समुह भएपनि उनीहरुविच विचारमा ठुलो भिन्नता छ । हुनत एमालेमा सचिवको लागि धेरै पद छन तर एउटैसमुह भित्रबाट निकट युवाले उम्मेदवारीको घोषणा गरेपछि कसलाइ कसरी मिलाउने भन्ने तनाव ओलीलाइ थपिएको छ । एमाले भित्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष देखि उपाध्यक्ष र महासचिवसम्म कसरीब्यस्थापन गर्नेभन्ने तनाव भइरहेको बेलामा ओलीलाइ अर्को तनाव भएको छ ।
सुन्तला बेचेर दोसल्लेमा र पचास लाख भित्रियो
५ माघ १४:५३
बेलायतमा प्रत्येक १५ नागरिकमध्ये १ जना कोरोना संक्रमित
२९ पुष १५:५२
विधानविपरीत समिति गठन गरिएकोमा आपत्ति
३ माघ १६:१२
३ माघ १७:२७
रुपान्तरणका कुरा गर्नेहरुमै एकता नभएपछि प्रक्रियाबाट बाहिरिएँ– रामचन्द्र पौडेल
२९ पुष २०:५२
मधेश प्रदेशको नामले मधेशी पहिचानमा ठूलो राहत : उपेन्द्र…
४ माघ १७:३०
३ माघ १३:२३
२९ पुष १०:५८
पीएम कपमा चार खेलः लगातार जितको दाउमा पुलिस र…
३० पुष ०९:०९